Global Voices teny Malagasy » Iran: Manao Fanentanana Hiarovana An’i Isfahan Ireo Mpiaro Ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2017 3:27 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Mampiasa fitaovana fampahalalam-baovao antserasera mba hiarovana ireo tsangambato ara-kolontsaina isan-karazany toy ny The Si-o-se Pol na “33 Pol”  (tetezana misy andohalambon-tetezana miisa 33), ravaka ara-javakanto iray ao afovoan-tanàna manatantara ao Isfahan  (Esfahan) Iran ireo Iraniana mpiaro tontolo iainana. Misy ankehitriny ny fifandirana eo amin'ireo manampahefana te-hanangana tetikasa metro vaovao sy ireo olom-pirenena voakasika manerana an'i Iran izay matahotra ny fahasimbana mety aterak'izany.
Nanoratra  taratasy misokatra ho an'ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena i Shahin Sepanta mba hiaro an'i Isfahan, renivohitry ny fanjakan'i Persiana teo aloha, tsy ho tratran'ny faharavana. Nanoratra ity bilaogera ity fa ny filankevitry ny tanànan'i Isfahan no nanapa-kevitra, tsy misy fanadihadiana fiomanana ampy, hanamboatra tonelina metro eo akaikin'ity ravaka ara-javakanto tsy manam-paharoa ity.
Misy ihany koa ny fanangonan-tsonia  natao mba hampitsaharana ny tetikasa metro ary efa nahazo sonia 1000 hatramin'izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/18/108725/
 The Si-o-se Pol na “33 Pol” : http://en.wikipedia.org/wiki/33_pol
 namaky : http://www.greennews.ir/detail_fa/?iData=391&iCat=346&iChannel=1&nChannel=News